ထိပ်တန်းလူကြိုက်အများဆုံးအမေရိကန်ရှေးအကျဆုံးအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ | ကဗျာ | အကောင်းဆုံးနားထောင်ခြင်း | WikiWon
1 သောမတ်စ် Stearns Eliot,
2 ကဗျာကိုက Said,
6 ကဗျာတစ်ပုဒ်ဒါက Said:
သောမတ်စ် Stearns Eliot,
ဟားဗတ်ကောလိပ်မှာမိမိမျိုးဆက်မဆိုအဓိကအမေရိကန်စာရေးဆရာရဲ့အကောင်းဆုံးပညာရေးရရှိထားသည့်, အဆိုပါ Sorbonne နှင့်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်က, သူကသူ့ poetry.Like သူ့မိတ်ဆွေလွှမ်းမိုးမှုသော Sanskrit နှင့်အရှေ့တိုင်းဒဿနကိုလေ့လာကဗျာဆရာဧဇရပေါင်သူအစောပိုင်းတွင်အင်္ဂလန်သို့ သွား. ထိုအရပ်၌စာပေလောကသားတစ်ဦးမြင့်မားကိန်းဂဏန်းဖြစ်လာခဲ့သည်. မိမိနေ့၏အများဆုံးလေးစားဖွယ်ကဗျာဆရာတွေတစ်ခုမှာသူ့အမော်ဒန်ထင်ရသောယုတ္တိမတန်သို့မဟုတ်စိတ္တဇ iconoclastic ကဗျာ J.Alfred prufrock ၏တော်လှန်ရေး impact.In အဆိုပါချစ်ခြင်းမေတ္တာသီချင်းခဲ့ (1905) အ ineffectual သက်ကြီးရွယ်အိုများ pruforck သူကော်ဖီဇွန်းဖြစ်တည်မှုနှင့်တစ်ဦးဖြုန်းတသက်တာမှာမိမိအသက်ထွက်တိုင်းတာခဲ့သည်သူ့ကိုယ်သူထင်. Eliot ရဲ့ Prufrock သူတို့နာမည်ကြီးအစအဦးသည်ခေတ်သစ် lif တူအသက်တာ၏မေးခွန်းမှမအဖြေကိုဆက်ကပ်ကြောင်း tawdry မြို့ပြ alleyways သို့စာဖတ်သူကဖိတျချေါ.
ဗမာတွင်ပုံစံတူပုံရိပ်အဆိုပါစွန့်ပစ်မြေယာကဲ့သို့ပြံ့နှံ့ ( 1922) which echoes Dante’s Inferno to evoke London’s thronged streets around the time of world war 😐
Related Post ကို: ခဲယဉ်းသုတေသန Hypothesis အဆိုပါ - တိုက်ခိုက်ခဲ့အမေရိကန်တော်လှန်ရေး
Robert Lee Frost was born in California but raised onafarm in the northeast until the age of 10. Eliot ထိုအပေါင်လိုပဲသူကဗျာ there.He အသစ်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ပူးတွဲအင်္ဂလန်သို့သှားကွ၏နယူးအင်္ဂလန်တွင်အစဉ်အလာလယ်ယာအသက်တာ၏ wrote (အရှေ့မြောက်ပိုင်းယူနိုက်တက်ပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်း) သူ့ရဲ့ဘာသာရပ်က Universal ပန်းသီးသောကျောက်နံရံများကိုကောက်နေနေကြတယ်အဟောင်းနည်းလမ်းတွေဟာလွမ်းဆွတ်မှုဖို့ဆွဲဆောင်, မိမိအချဉ်းကပ်မှုကသူ့အလုပ်မကြာခဏလှည့်စားရိုးရှင်း Lucid နှင့်လက်လှမ်းမီခဲ့ပေမယ့်ခြံစည်းရိုးတိုင်းပြည်လမ်းများ, အများစုကကဗျာတစ်ဦးနီးပါးညှို့သောကဗျာကိုအစီအစဉ်ဖြင့်တိတ်ဆိတ်နှင်းဖုံးညဦးယံအချိန်သေမင်း၏လုံးဝအပ်သောမချဉ်းကပ်မှုအကြံပြုစေခြင်းငှါဥပမာတစ်ခုပိုမိုနက်ရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုအကြံပြု. တစ်ဦးနှင်းဖုံးညနေပိုင်းအပေါ်တောအုပ်အားဖြင့်ရပ်တန့်ကနေ (1923)
Related Post ကို: ခေတ်မီစမ်းသပ်
သမိုင်း	american poems about life, anglo-american literature poems, best american poets of all time, famous american poems, famous american poets 20th century, most famous american poets, short american poems, the best american poetry	bookmark
ယခင်အပိုဒ် ၏ Divi အများစုဟာကို Creative WordPress Themes 2017 elegant themes ecommerce divi web designer
next ကိုပုဒ်မ Top New Tips on Fiverr, How to make money on Fiverr